चीनले कङ्गोको महत्वपूर्ण खनिजको नियन्त्रणमा यसरी जमायो कब्जा ! - नेपाल एक्सन Online News Nepal
Home अन्तराष्ट्रिय चीनले कङ्गोको महत्वपूर्ण खनिजको नियन्त्रणमा यसरी जमायो कब्जा !
चीनले कङ्गोको महत्वपूर्ण खनिजको नियन्त्रणमा यसरी जमायो कब्जा !
Previous articleचीनको खतरनाक कदमको पर्दाफास: ढुवानी कन्टेनरहरूमा मिसाइलहरू लुकाउँदै,के हो कारण ?
Next articleचीनको एउटा कम्पनी कालोसूचीमा अर्बौं रकम डुब्ने खतरा , विश्वको सबैभन्दा ठूलो ऋण कम्पनी ब्ल्याक लिस्टमा